ကလေးများကသူတို့သိချင်စိတ်နှင့်၎င်းတို့၏ကစားဗီဇအထဲကသရုပ်ဆောင်ရသောအခါအပြစ်မရှိကြောင်းတဲ့သူအနည်းငယ်သာခရီးသွားများအတွက်နှင့်စူးစမ်းရှာဖွေသူများဖြစ်ကြသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ကစားစရာအကြမ်းခံများနှင့်ယဉ်ပါးဖြစ်သင့်သည်။
နွေရာသီ, ဒါကြောင့်အပြင်မှာဆက်နေရန်ဖိတ်ခေါ်အသစ်ကစားစရာအဘို့နှုတ်ဆက်နိုင်အောင်နှေးကွေးနေ, အတွေးအခေါ်များကိုအတော်လေးအသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အခါ။ ကလေးများမဆိုအသက်အရွယ်မှာ play ဥယျာဉ်တော်၌သို့မဟုတ်ကစားကွင်းအပေါ်ပြင်ပတွင်ဖြစ်လို။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဆလိုက်, တစ်ဦးလွှဲနှင့်တစ်ဦး sandbox 'ရပ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဖေကအထူးသဖြင့်ကောင်းစွာထင်လျှင်, သူကသေးငယ်တဲ့နိုက်တို့နှင့်ကြီးသောရေကြောင်းသူတို့ရဲ့ကမ်ဘာပျေါတှငျကိုယျ့ကိုယျကိုကိုဗတ္တိဇံနိုင်သောနေရာအဖြစ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကစားမျှော်စင်, တည်ဆောက်။
နောက်ထပ်ပိုင်းတွင်ကစားတာဝါတိုင်အတွက်ဆက်လက်တည်ရှိရန်, သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောBauausführungenအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများထဲမှာမသာတည်ရှိနေ။ ဒါပေမယ့်ပစ္စည်းသစ်သားရှင်းလင်းစွာကဒီမှာနိုင်ကြနှင့်၎င်း၏သာယာသောမျက်နှာပြင်များအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းဖြစ်သောကြောင့်ယင်း၏ရှည်သောအသက်၏မသာခေတ်စားဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းတောင်တက်မျှော်စင်မြင့်မားသောအရည်အသွေးသစ်သားနှင့်ကောင်းသောလက်ရာများ၏လုပ်ကြောင်းသင်တန်း၏လိုအပ်သောရှိပါသည်။ နည်းပညာပိုင်းပါရမီရှင်သည်ဘိုးဘေးတို့ပင် post ကိုကနေသူ့ကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သစ်သားနှစ်ထပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအဘို့, သစ်သားအညီသင်တန်း sanded ရပါမည်နှင့်ဖိအားတစ်ခုမလုံခြုံသောအရောင်အဆင်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ impregnated ။
စီးပွားရေးအရရရှိနိုင်သောပစ္စည်းများသင့်လျော်သောကုသမှုပေးထားသာကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လက်ျာရေးကိရိယာများနှင့်အတူစုဝေးခံရဖို့ရှိသည်နေကြသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြုသောအမှုမရနိုငျလြှငျ, မိဘတွေကပံ့ပိုးပေးမယ့် configuration ကိုဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်းခြင်းရှိမရှိအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
ထိုလုလင်သည်မဖြစ်မနေ၏ဥယျာဉ်တော်၌ပြင်ပတွင်ရာသီပြီးနောက်ယခုနောက်တဖန်ရှက်တိုက်ခန်းထဲမှာဂိမ်းပိုပိုပြီး။ သစ်သားကစားစရာဒီနေရာမှာတစ်ခု ပို. ပို. အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ။ ရေရှည်တည်တံ့မှု၏ပြဿနာမူအရ ပို. ပို. အရေးကြီးသောဖြစ်လာနေသည်, ဒါပေမယ့်လည်းသဘာဝဖို့နီးကပ်နှင့်မြင့်မားသောကြာရှည်ခံမှုပစ္စည်းသစ်အတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကဖြစ်ပါသည်။
ပလပ်စတစ်အထူးသဖြင့်သူငယ်များအဘို့ကစားစရာနှင့်အတူ, ကြောင့်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်မေးခွန်းထုတ်စရာအရောင်ကံမကောင်းအဖန်ဖန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းကိုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သုတ်ဆေးနဲ့ကုတ်အင်္ကျီဆံ့နိုငျသောကွောငျ့နေဆဲ, သစ်သားကစားစရာလုံခြုံစိတ်ချစွာ, စျေးပေါဝယ်မရသင့်ပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းနှစ်ပေါင်းများစွာလူသိများခဲ့ကြကြောင်းအမှတ်တံဆိပ်မှစတိုးဆိုင်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးကလေးများကြောင်း flash နှင့် Beep ပါဘူးလျှင်ပင်, သစ်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ကစားစရာကိုချစ်။ အသီး, ဥ, ရေခဲမုန့်နှင့်အချိုရည်သစ်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပုလင်း, ရထားလမ်း, ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းများ, ပဟေဠိနှင့်ပညာရေးဂိမ်းကကစားရန်အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးသားသမီးတို့အဘို့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလည်းကြောင်းကိုဒီဇိုင်းသင်တန်းအရည်အသွေးနှင့်ပရိယာယ်ယနေ့ပူဇော်ကြသည်နှင့်အတူဆိုင်။
ဤအကစားစရာတွေနဲ့ဆောင်းပါးတွေ၏ခံစားတောင်မှမျိုးဆက်တစ်ဆက်ထက် ပို. ကြာရှည်စေနိုင်သည်။
Gummitwist ကစား | ဂိမ်းများအပန်းဖြေ
အဘယ်ကြောင့်ကစားနိုင်အောင်အရေးကြီးပါတယ် | ကလေးများဝါသနာအပန်းဖြေ
တက်ပြီးဥယျာဉ် | အပန်းဖြေနှင့်ဂိမ်းများ
မိုးရွာရွာဂိမ်းများ - မိုးရေထဲမှာကစားခြင်း
Boy ကစား & မိန်းကလေးများ Coloring
ခုန်ကြိုးကစား Coloring ကလေးများ
ကလေးတွေနဲ့အတူ Play - ဘယ်လိုအရေးကြီးလှသည် ...